लकडाउनको समयमा के गर्ने ? उपनाउनुस यस्तो उपाय : प्रकट खनाल | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
लकडाउनको समयमा के गर्ने ? उपनाउनुस यस्तो उपाय : प्रकट खनाल
अहिले विश्व कोरोनाको महामारी झेली रहेको छ। थुप्रै राष्ट्रहरुले लकडाउन गर्नु परेको अवस्था छ। यो समयमा हामीहरु घरमै बसेको र आफ्नो शरिरलाइ चाहिने पर्याप्त मात्रामा Exercise गरेका छैनौ। यदि यस्तै रहने हो भने हामी विभिन्न रोगहरु जस्तै सुगर, हाइपर टेन्सन जस्ता रोगको सिकार अवश्य हुनेछौ। यस लकडाउनको अवधिमा हामीले घरमै बसेर गर्न मिल्ने Exercise हरु गर्नुपर्छ र स्वस्थ रहनु पर्छ। केहि स्वस्थ रहने उपाएहरु यस प्रकारका छन् : – आफ्नो कार्यतालिका निर्धारित गर्ने, हामी कम्तिमा दिनको ७ देखि ९ घण्टा सुत्न जरुरि छ र यसको लागि आफुलाई मिल्ने समय छुट्टाएर सुत्नु पर्छ।
– प्रशस्त मात्रामा पानि पिउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै कोरोनाको महामारीको अवधिमा मानिसले आफ्नो शरिर हाइड्रेटेट राख्न पर्ने जनाएको छ। – लकडाउनले गर्दा मानिसको Mental Healthमा पनि असर परि रहेको छ अनि त्यसै माथि समाचारहरुमा आएको नकारात्मक खबरहरु जुन हामीले Facebook, Twitter आदिमा देख्छौॅ त्यसले झनै मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पारि रहेको छ। त्यस कारण हामीले समय समयमा Social Media बाट ग्याप लिन जरुरि छ। – हामी Physically फिट हुनको लागि आफ्नै घरको छतमा स्किपिंग गर्न सक्छौॅ, जसको लागि चाहिने उपकरण भनेको एउटा डोरी मात्र हो जुन सहजै रुपमा पाउन सकिन्छ।
– योगा योगा हाम्रो शरिर र मस्तिष्क दुबैको लागि फलदायी छ अनि यसको लागि धेरै ठाउॅको आवस्यकता पनि पर्दैन। हामीले Youtube तथा अन्य भिडियोबाट योगा सिक्न सकिन्छ। – नाच्नु नाच्नु पनि एक किसिमको exercise हो। यदि कसैलाई नाच्नमा रुचि छ भने उसले नाचेर पनि आफ्नो शरीरलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। – नेपाली समाजमा घरको काम नारीले गर्ने चलन छ। घरको काम गरेर पनि आफ्नो शरीरलाई फाइदा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसकारण अहिलेको समयमा नारी पुरुष नभनी सबैले मिलेर काम गर्दा सबैका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ। -Lockdown ले गर्दा सर्वसाधारणको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ। त्यसैले घर बाहिर निस्किन नपाए पनि घरको छतमा गएर आधा घन्टा बसियो भने पनि यसले केही हदसम्म सकारात्मक असर पार्न सक्छ। -Push up,sit up जस्ता exercise घरै बसि बसी बिना स्रोत या साधन गर्न सकिन्छ। यसरि नै लकडाउन लम्बिदै जाने अनि हामीहरु घरमै कुनै किसिमको Physical Activity गरिएन भने हाम्रो Physical र Mental Health दुवै मा असर पुग्न सक्छ। लकडाउनमा घरमै ब्यायाम गरेर स्वस्थ रहनुस,।
कोरोना डायरी; विद्यार्थी राजनीति र येसको आवश्यकता